Dubartoonni Gammojjii Sahaaraa Keessatti Hidhamanii Jiran Maal Jedhu ?
Faayilii - Baqattota Itoophiyaadha ka'anii gara biyya alaa karaa seeraan alaa deemaan keessa an magaala Bossasoo gahan amma tokko
Lammiwwan Itiyoophiyaa, Ertraa akkasumas biyyoota Afrikaa biroo irraa lubbuu ofii olfachuuf jecha gara Sudaanti baqachuun gama gammoojjii Sahaaraatiin Gara masriitti kan qajeelan ta’u beekamaa dha.Kanneen mulka’an masrii dhaqqabuun galaana irraan lafa carraan isaanii qabe dhaqqabu.
Warri hin milkoofne immoo carraa hidhaa, galaanaan nyaatamuu fi eessa buteen dhabamuutu isaan eeggata.Imaltuu wal fakkaataaf Sudaan irraa ka’an akkuma daangaa Masirii seenanii fagoo ituu hin deemiin qabamanii mana hidhaa gammojjii sahaaraa jiru keessatti rakkataa jiran gidduudhaa dubartootaa fi kanneen ijoollee qaban akka jiran dubbatu.
“Daabboo fi bishaan nuu kennu, bishaan isaa waan gubuuf dhuguun hin danda’amu.Mana keessatti nu ittisu waan ta’eef ho’ii mana keessaa daran hamaa, dhagaa irra nu ciibsu” jedhu.Dhiroonnis mooraa sana keessatti kutaa biraa keessatti hidhamanii jiru.Biyya irraa dheessanti hanga deebifamanti hidhaa kana keessa akka turan itti himamee jira.Kan akka hamaatti dhukkubsataa jiraatan iyyu addatti gargaarsii argatan hin jiru.
Baqattonni isaan giddutii gara biyya irraa dheessanti deebifaman akka jiran dubbatu. Hidhaan kun amma iyyu itti fufee waan ta’eef birmannaa barbaanna jedhu.